बुवा कांग्रेसमा भए पनिपूर्वयुवराज पारसलाई सोनिकाको सर्मथन, यस्तो छ भित्री रहस्य ? « Janaboli
काठमाडौं । विश्वमा सबभन्दा धेरै गल्ती गर्ने भनेको मानिसले हो । मानिस गल्ती गर्छ अनी सुधार पनि गर्छ तर कतिपय अवस्थामा गल्ती हुँदैन । सामान्यतया अर्को व्यक्तिले गरेको कामको प्रतिकृया दिने कार्यहरु पनि हुन्छन् ।
यो कस्तो कुरा हो भने कसैले एक गालामा थप्पड हाुन्यो भने अर्को थाप्नुपर्छ तर अर्कोमा पनि हाुन्यो भने के गर्ने ? अवश्य पनि प्रतिकृया जनाउनुपर्छ । मानिस जति नै महान वा सामान्य किन नहोस उसले अन्याय सहनुहुँदैन । यस्तै दृश्य हिजो विमानस्थलमा देखियो जुन अहिले भाइरल भइरहेको छ ।
भएको के भने पुर्व युवराज पारस शाह आफ्नी आमा पुर्वरानी कोमल राज्यलक्ष्मी देवी शाहलाई थाइल्यान्डको लागि विदाई गर्न विमानस्थल जाँदा केही फरक दृश्य देखियो । विमानस्थलको भीआईपी कक्षको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) ईश्वर खत्रीले पारसका छोरा र भाञ्जालाई रोक्न खोजेपछि पारस रिसाएका थिए ।
थाई एयरको जहाजबाट थाइल्यान्ड हिँडेकी आमा कोमललाई विदा गर्न विमानस्थल पुगेका पारसले छोरा हृदयेन्द्र र भान्जालाई प्रहरीले बाटो रोकेको भन्दै प्रहरीलाई धकेलेका थिए ।
यसलाई लिएर अहिले दुई थरी प्रतिकृयाहरु आइरहेका छन् । यही बेला पारसको सर्मथनमा पछिल्लो समयकी चर्चित युट्यबर सोनीका रोकायाले फेसबुकमा एक स्टाटस लेखेकी छिन् ।
स्टाटस मात्र लेखिनन् । उनले पारससँग निक्कै क्लोज भएका तस्वीरपनि साझा गरेकी छिन् । तस्वीर हेर्ला के हो उनीहरुको चक्कर भनेर सोच्न बाध्य बनाउँछ । यद्यपी त्यतातिर सायद काम कुरा नमोडिएकोपनि हुनसक्छ । यस्तो छ उनको स्टाटस,
‘बाघ जहिले नि बाघै हुन्छ जहाँ पनि गर्जने क्षमता राख्दछ । बिरालो सम्झेर बाघलाई जिस्क्याउने चेष्टा नगरे हुन्छ । अरुलाई दोष दिनु भन्दा पहिला आफुले गरेका कमी कमजोरी सच्याउदै लिनु उचित होला ।
स्यालको झुण्डले कहिले बाघको सिकार गर्न सक्दैन । बाघ जहिले नि बाघ हुन्छ बाघले कहिले घाँस खादैन । चेतना भया ।’ उनले अगाडी लेदिन, ‘सन्दर्भ : पूर्वराजकुमार पारस साहले विमानस्थलमा छोराछोरीलाइ दुर्व्यवहार गरेको भन्दै प्रहरी माथि नै हात हालेपछि भिडियो भयो भाइरल !
बिमानस्थलमा नै हाम्रो राजा हाम्रो देश भन्दै नारा लगाउदै गरेका पारसको सनक देखेर भए चकीत !’ ति प्रहरी अधिकारीले जानेर अर्थात चिनेर रोके वा नचिनेर रोके यसले सायद साहलाई नराम्रो लागेको हुनुपर्छ उनले तत्काल प्रतिकृया जनाइहाले । अहिले प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ तर उता खत्री भने यो सामान्य भएको बताउँछन् ।